आफ्नै बाबुले गरे छोरीको गोली हानी हत्या, एकै ठाउँमा दुई महिलाको बीभत्स हत्याले पूरै जिल्ला नै शोकमा - Jagaran News Jagaran News
आफ्नै बाबुले गरे छोरीको गोली हानी हत्या, एकै ठाउँमा दुई महिलाको बीभत्स हत्याले पूरै जिल्ला नै शोकमा
Published On :7February, 2021 3:24 pm
काठमाडौं , माघ २५ । यस्तो घटना जहाँ आफ्नै बुवाले गोली हानी छोरीको हत्या गरेका छन् । यो बैतडीको घटना हो । बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिका–१० महरागाउँका ५५ वर्षीय धनबहादुर महराले आफ्नै छोरीको गोली हानी हत्या गरेका हुन्।
आफ्नै छोरीलाई बाउले कसरी गोली हान्न सक्यो होला त के तपाई सोच्न पनि सक्नु हुन्छ त यस्तो सम्म गर्लान भनेर ? शनिबार दिउँसो करिब ३ बजेतिर २० वर्षीया छोरी बेलमति महरा धामीलाई गोली हानी हत्या गरेको स्थानीयले बताएका छन् । भरुवा बन्दुकले छोरीको पछाडिबाट पिठ्युमा गोली प्रहार गरी हत्या गरेका महरा जंगलतिर भागेका थिए ।
उनको खोजीको लागि प्रहरी परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख डिएसपी नारायणप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् । हतियारसहित भागेका उनले राति आफ्नै पुरानो घरमा आगजनी समेत गरेका छन् । यता मृतक बेलमतिको एक वर्षीय छोरा समेत छन् ।
बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिका–३, जोग्गौडाकी २० वर्षीया बेलमती महरा धामी करिब एक महिना अगाडि पुर्चौडी नगरपालिका–१०, विजयपुरस्थित माइती घरमा आइन् ।विवाह गरेर जोग्गौडा गएपछि बुवा आमासँग भेटघाटका लागि उनी बेलाबेला माइती आउजाउ गरिरहन्थिन् । तर यसपटक उनको माइती बसाइ अन्तिम बन्यो ।
जंगलतिर हतियारसहित भागेका महराको खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । एक महिनादेखि माइतमा बस्दै आएकी बेलमतिलाई किन गोली प्रहार गरे भन्ने विषयमा अझै खुलेको छैन ।
स्थानीयका अनुसार धनबहादुरले बहुविवाह गरेका छन् । यही कारण घरमा दिनहुँ कलह भइरहन्थ्यो । शनिबार पनि धनबहादुर र उनकी कान्छी श्रीमतीबीच झगडा भएको थियो ।
प्रहरीका अनुसार सोही क्रममा झगडा छुट्याउन गएकी छोरी बेलमतीलाई धनबहादुरले गोली हानेका हुन् ।
‘श्रीमान् र श्रीमतीबीच भएको झगडा छुट्याउने क्रममा छोरीलाई गोली प्रहार गरेको खुलेको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी मुकेश सिंहले बताए ।
गोली प्रहारबाट छोरीको घटनास्थलमै ज्यान गएको हो ।’ घटनाले पूरै गाउँ शोकमा डुबेको छ ।
पुर्चौडी नगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष जितबहादुर विष्टका अनुसार बेलमतीको एक वर्षको दुधे बच्चा (छोरा) छ । चार दिनभित्र बैतडीमा दुई महिलाको बीभत्स हत्याले पूरै जिल्ला शोकमा डुबेको छ ।
यसअघि यही माघ १४ गते विद्यालयबाट फर्किने क्रममा दोगडाकेदार गाउँपालिका–७ की १७ वर्षीया भागरथी भट्ट घरनजिकै हत्या गरिएको अवस्थामा फेला परेकी थिइन् । अहिले उनको हत्याराको माग गर्न आम जनमासबाट आवाज उठ्न थालेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा बलात्कारका घटना निकै बढ्न थालेका छन् ।
छारी चेलीको सुरक्षा नभएको अहिले आमाहरुले गुनासो गर्न थालेका छन् । यतिसम्म कि उनीहरुले भनेका छन् सरकार दिने भए छोरीलाई सुरक्षा दिऊ नत्र हामी छोरी नै जन्माउँदैनौ । यति बेला हरेक आमालाई आफ्नो छोरी चेली असुक्षित भएको भन्दै चिन्तामा छन् ।
निर्वाचन आयोगद्वारा नेकपा औपचारिक रुपमा खारेज, पुरानै अवस्थामा अब एमाले र माओवादी
काठमाडौं, फागुन २५ । निर्वाचन आयोगले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नाममा रहेको
माओवादी केन्द्रले बोलायो केन्द्रीय कमिटी बैठक , अरु के के भयो निर्णय ?
काठमाडौं , फागुन २५ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) केन्द्रले यही फागुन २९ गते केन्द्रीय
कर्णाली नदीमा बेपत्ता थप दुईजनाको शव भेटियो, एकजना अझै बेपत्ता
काठमाडौं , फागुन २५ । कर्णाली नदीमा बेपत्ता भएका एकै परिवारका पाँचजनामध्ये ४ जनाको शव
२३ अंकले घट्यो नेप्से , कारोबार ४ अर्ब माथि
काठमाडौं, फागुन २५ । सेयर बजार परिसुचक नेप्से २३ अंकले घटेको छ ।सो अंकको गिरावटपछि